“Waa riyo ii rumowday inuu tababare ii noqdo Guardiola, sidoo kale afar sano oo qurux badan ayaan la qaatay Klopp” – Gool FM
“Waa riyo ii rumowday inuu tababare ii noqdo Guardiola, sidoo kale afar sano oo qurux badan ayaan la qaatay Klopp”
(England) 12 Feb 2020. Xiddig kasta ee ku xamaasha kubadda cagta ayaa wuxuu jeclaan lahaa inuu ka hoos shaqeeyo labada macallin ee Jürgen Klopp iyo Pep Guardiola.
Haddaba ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundodan ayaa aqbalay wargeysi inuu qeyb ka noqdo wareysi looga hadlayay arrimo quseeya Guardiola iyo Klopp, kuwaasoo labadaba tababare u soo noqday.
Ugu horreyn jaceylka uu u qabo Klopp waxa uu ku qeexay:-
“Waxaan la qaatay afar sano oo wanaagsan Jurgen waxaanan u jeclahay shaqsi ahaan iyo maamule ahaan, laakiin waxaan dareemay inay tahay waqtigii wax kale la qaban lahaa”.
“Waxaan doonayay inaan ka tago Dortmund mana aanan dooneynin inaan ka fekero waqtiga aan isaga la joogay markii aan ku biirayay koox cusub”.
Sidoo kale ciyaaryahanka reer Germany ayaa ka hadlyay macallinkiisa haatan Man City ee Pep Guardiola:-
“Sida iska cad, dhinaca kale waxaa jiray Pep Guardiola oo aan jeclaa daawashada markii uu joogay Barcelona, sida uu u sameeyay kooxdiisa hab ciyaareedkeeda”
“Waxaan ka hor imid [Bayern] waadna dareemeysay garoonka sida ay u xooggan yihiin dhinacyadiisa, waxaana had iyo jeer riyo ii ahayd in aan ugu yeero macallinkeyga maalin uun, waana riyo ii rumowday in Guardiola uu tababare ii noqdo”.
Paul Pogba oo diyaar u ah kulanka weyn ee Manchester derby